ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा र बैँक खाताका लागि राष्ट्रिय अभियान
०१ बैशाख २०७६, काठमाडौं नयाँ वर्षका अवसरमा आज नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा र सबै नेपालीलाई बैँक खाता खोलाउने राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न
श्रम स्वीकृति खुलेपछि कलिङ भिसामार्फत मलेशिया जाने कामदारको संङख्या वृद्धि !
२९ चैत्र २०७५, काठमाडौ श्रम, रोजगाार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कलिङ भिसामार्फत मलेशिया जाने कामदारहरुको श्रम स्वीकृति खुला गरेपछि स्वीकृति लिने कामदारको संङख्या बढेको छ । श्रम स्वीकृति खुला गरेपछि
महासचिव पौडेललाई भतिज भिष्मराजको खुल्ला पत्र !
२९ चैत २०७५, काठमाडौं नेकपाका महासचिव तथा पुर्ब अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेललाई आफ्नै भतिजले मार्मिक पत्र लेखेका छन् । बालुवाटारको ८ आना सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा देखिएपछि विवादमा मुछिएका पौडेल सबैतिर
पिनास के हो ? जान्नुहोस् लक्षणदेखि बच्ने उपायसम्म !
२९ चैत्र २०७५, काठमाडौं पिनास भनेको साइनसहरुको इन्फ्लामेसन हो । साइनस भनेको टाउको र अनुहारका हाडहरुमा हुने हावा भरिएका खाली भागहरु हुन् जो स–साना प्वालहरु ओस्टियम को माध्यमबाट नाकको श्वासमार्गसँग
बजेट अभावको कारण गैंडा गणना यो वर्ष नहुने !
२९ चैत्र २०७५, काठमाडौं बजेट अभावका कारण यो वर्ष गैंडा गणना नहुने भएको छ । आगामी अप्रिल र मे महिनामा हुनुपर्ने गैंडा गणना बजेट अभावका कारण हुन नसक्ने भएको हो
वैज्ञानिकले भेट्टाए मानव जातीको अर्को प्रजाती !
२८ चैत्र २०७५, काठमाडौं मानव प्रजातिको सूचीमा अर्को एउटा नाम जोडिएको छ जसको अवशेष फिलिपिन्सको एक गुफामा भेटिएको छ । लोप भइसकेको यो नयाँ प्रजातिको अवशेष फिलिपिन्सको सबैभन्दा ठूलो द्वीप
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सैनिक अधिकृतहरुको दीक्षान्त समारोहको सम्बोधन !
२८ चैत्र २०७५, काठमाडौं बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सैनिक अधिकृतहरुको दीक्षान्त समारोह खरिपाटीमा सम्बोधन गरेका छन् । समारोहमा सम्बोधन गर्दै ओलीले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितहरुको संरक्षणमा नेपाली सेनाले
ललितपुरमा उर्जासम्बन्धी १६ दिने प्रदर्शनी हुदैँ !
२८ चैत्र २०७५, काठमाडौं नेपालस्थित जर्मन दूतावास ललितपुरमा ‘उर्जासम्बन्धी १६ दिने प्रदर्शनी’ हुने भएको छ । प्रदर्शनी आगामी अप्रिल १२ तारिखमा सुरु भई २६ तारिखसम्म पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको सूचना
जानी राखौँ : लालीगुराँस जुस सेवनले के -के फाईदा पुर्याउछ ?
२७ चैत २०७५,काठमाडौं नेपालको राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस नचिन्ने त कमै होलान् । लालीगराँसलाई नेपालमा मात्रै हैन भारतको उत्तराखण्डमा पनि राष्ट्रिय फुल मानिएको छ । पुस महिनादेखि माघ, फागुनको समयमा फुल्ने
वीर अस्पतालका विरामी चिकित्सकप्रति आक्रोशित !
२७, चैत्र २०७५, काठमाडौं काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालमा उपचारार्थ विरामीहरुले चिकित्सकहरुले आफूलाई सास्ती दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । विरामीलाई बोलाउने अनि उपचार नगर्ने भन्दै विरामीहरुले चिकित्सकहरुप्रति आक्रोश पोखेका हुन् ।
कांग्रेस र राप्रपाका कार्यकर्ता नेकपामा प्रवेश !
२७ चैत्र २०७५, काठमाडौं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आगन्तुक कार्यकर्तालाई स्वागत गरेका छन् । उनले आज चितवनको माडीको एक कार्यक्रममा सहभागी हुने भई नेपाली कांग्रेस तथा राप्रपाका दुई दर्जनभन्दा